(FAALLO) Madaxda Mustaqbalka ha loo doorto Mas’uuliyiin Karti Waddaniyad leh, kana xishooda Boollida Qaranka. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Mashaqo Siyaasadeed, colaado, musuq, is-jiidjiid siyaasadeed iyo Madax Caynba cayn ah ayaa lagu soo nolol qaatay tan iyo wixii ka dambeeyey Burburkii Dowladdii Kacaanka bilowgii sannadkii 1991-kii.
Isjiidjiidkii Siyaasiyiinta Ururraddii Hubeysnaa ayaa waxay ubuc-dhexaad u noqdeen sal dhigasho la’aanta nololeed iyo nabadeed, waayo Hoggaamiyayaashii Jabhadaha Hubeysnaa ma lahayn Istaraatijiyad Mideysan iyo Qorshe Qaran oo ay dalka ku hagi lahaayeen, markii ay Dowladdii Kacaanka ka tureen Talada dalka.
Qaraxyaddii lala soo jaan-qaaday xilligii Jabhadaha Hubeysan ayaa weli sii socda, waxayna u muuqataa in Jiilashii Maleeshiyaddii hore inay sii beddelaan Maleeshiyo kale oo hubeysan, kuwaasi oo ku doodayo inay qoriga ku baadi-goobaya Baadi ka maqan oo aan loo jeedin.
Dib-u-yegleelista Nidaamka Dowladnimadda ayaa waxay u muuqdaan inaan weli asaas fiican loo dhigin, isla markaana aan weli lagu guuleysanin dhamaystirka Dib-u-heshiisiinta, Dib-u-soo-celinta Rajadda Ummadda iyo Mustaqbalka Qaranka.
Dhowr Madaxweyne ayaa Talada dalka isaga kala dambeeyey dhowr iyo tobankii sanno ee la soo dhaafay, wuxuuna Hoggaamiye kasta ballan qaaday inuu ka dhabeyn doono Ajendooyinka ay soo bandhigeen, balse, Hoggaamiye kasta waxa uu xilka ka degayey isagoo aan wada fulinin Ballan-qaadkii Siyaasadeed.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inay Siyaasiyiinta Soomaalida ka wada siman yihiin inay soo bandhigaan Ballanqaadyo lagu larayo Beer-laxawsi Siyaasadeed, waxayna inta badan Mas’uuliyiinta marka ay xilalka qabtaan ku mashquulaan xaalladdo kale iyo Ku-takri-fal Maamul.
Bisaylka Bulshadda ayaa waxaa suurtogal ah inay wax ka beddeli karaan qiimeynta Siyaasiyiinta iyo Nidaamka lagu soo dooran karo Madaxda Qaranka, marka la gaaro Xilliga lagu dooranayo Madaxda Mustaqbalka.
Madaxda cusub ee la soo dooran doono ayaa waxaa hor yaalla Shaqooyin Qaran oo ay Madaxdii hore ka mashquuleen inay muhiimadda koowaad siiyaan, waxaana ka mid ah Galaangalka Dib-u-heshiisinta Siyaasadda, Soo-celinta Nabadda iyo Midnimadda Somalia, Dhamaystirka Dib-u-heshiisiinta, Xukunka Isla-xisaabtanka leh, La-xaajoodka Siyaasiyiinta iyo Kooxaha Hubeysan ee mucaaradka ah iyo Ilaalinta Hantida iyo Dhaxalka Qaranka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa ayaan-darro kale majaraha lala geli doonaa haddii Madaxda la soo dooran doono noqdaan kuwo baylihiya Mas’uuliyadda lagu aaminay, isla markaana ay xaalladda Dowladnimadda iska sii ahaato Kud ka-guur oo Qanjo u guur iyo La-mood, noqonse weyday !!!
Dowlada Soomaaliya oo ka warbixisay qaabkii uu baasaborka ku helay Ninkii isku qarxiyay Daallo